Apple iCloud | အိုင်ဖုန်းသတင်း
iCloud တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် cloud သိုလှောင်မှုစနစ် Apple အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများအတွက်သီးသန့်။ ဓာတ်ပုံများ၊ တေးသီချင်းများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ပြက္ခဒိန်များ၊ Bookmarks များ၊ မှတ်စုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိုင်ဖုန်းများ၊ iCloud မွာ iTunes မပါဘဲသင်၏ settings များကို cloud ထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည် Restore လုပ်ပြီးနောက် device ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုပဲပုံမှန်ပြန်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင် Apple မှဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ပြုလုပ်သောအပြောင်းအလဲများနှင့်သူမိတ်ဆက်ပေးသောသတင်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
အက်ပဲလ်ဟာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေပြီး iCloud + ကို WWDC 2021 မှာစတင်မိတ်ဆက်လိုက်တယ်
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
WWDC 2021 တွင် iCloud နှင့် Apple ID တို့ကိုအချိန်ပေးခဲ့သည်။ အသစ်နှစ်ခုအသစ်ကြေငြာခဲ့သည် ...
por အဲလက်စ်ဗစ်ဆန်တီ လွန်ခဲ့တဲ့ 11 လအတွင်း .
Apple One ကိုလွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကမှဖြန့်ချိခဲ့သည်။ Apple ပါဝင်သည့် "all-in-one" ဝန်ဆောင်မှု ...
တရားမျှတမှုနှင့်အရည်အချင်းရှိသောအာဏာပိုင်များကကုမ္ပဏီများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များထက်မကျော်လွန်အောင်သေချာစေသည်။ အများအပြား…
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့2အနှစ် .
ဂူဂဲလ်တိမ်တိုက်သည်ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းလုံးတွင်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းခဲ့သည်။
သူတို့မှာရာဇ ၀ တ်မှုရှိတယ်၊ သူတို့ခိုးတာအပြင်သင့်ရဲ့ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ဖို့သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုတောင်းတယ်။
ယခုအချိန်တွင် Celebgate သည်သီအိုရီအရ၊ အခန်း၏ထောင်ချခံရပြီးနောက်ဆက်လက်ပြောဆိုနေပုံရသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များထံမှ iCloud ရုပ်ပုံများကိုခိုးယူမှုဖြင့်အဖမ်းခံရသောလေး ဦး အနက်မှဂျော့ဂ်ျနာဖano
iCloud သည် "must have" ဖြစ်လာပြီးသင်၏အက်ပ်ကွန်ပျူတာများတွင်အချက်အလက်အားလုံးကိုလုံခြုံစွာသိမ်းထားရန် ...
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Apple သည်ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှုဆာဗာများစတင်ရန်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
သင်၏ Apple ID ကိုပယ်ဖျက်ပြီးအခြားအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ရမည်နည်း